Continuity na Handoff ho an'ny Mac alohan'ny 2012 | Vaovao IPhone
Carmen rodriguez | | Vaovao IPhone, iOS 8
Andro vitsy lasa izay dia namoaka ny endrika ampandehano ny Handoff amin'ny iPhone, iPad ary Mac anao, fa tamin'izany fotoana izany dia hitantsika fa maro amintsika no tsy manana Mac farany ary noho izany tsy ho afaka hankafy izany tombony izany isika.
Rehefa avy nanadihady misy safidy roa izany dia azo atao mba hahafeno fepetra amin'ity fampiasa ity raha tsy mividy solosaina vaovao, izay tsy mendrika izany amin'ny 99 isan-jaton'ny tranga.
Ny niandohan'io olana io dia ny Bluetooth, izay mandra-pahatongan'ny nanamboarana azy tamin'ny tapaky ny taona 2011 Bluetooth 2.1 + ERD «protokol» somary ifotony izay napetraka tao 2007. Mandalo ny kinova 3.0 an'ny 2009 sy 4.0 an'ny 2010.
Heverinay fa ny takiana izay noheverina fa nilaina dia voamarika amin'ny peripheral amin'ny birao ary kely ihany, noho izany, ny kinova 2.1 dia nahafeno ny filan'ny bandwidth izay tombanana amin'ny famindrana 3 megabit isan-tsegondra raha ny kinova rehetra taty aoriana dia ao amin'ny 24 megabit isan-tsegondra.
Amin'ny maha-rafitra ny radio matetika azy, ny karazany dia azo refesina amin'ny hery lehibe indrindra ary noho izany ny anao sehatra. Kilasy telo izy ireo: Kilasy 1 miaraka amin'ny herin'ny 100 mW sy ny halavany 30 metatra, Kilasy 2 2.5 mW herinaratra ary elanelam-potoana 5 ka hatramin'ny 10 metatra ary ny Kilasy 3 miaraka amin'ny herin'ny 1 mW ary metatra iray monja ny elanelany.
Ny kinova ilaina hampiasaina Handoff dia 4.0, izay misy Bluetooth mahazatra, ny Bluetooth haingana be (Mifototra amin'ny WiFi) sy ny protokolon'ny Bluetooth ambany fanjifana (Angovo Angovo Bluetooth na BLE, izay miasa miaraka amina stack ary ny protokolony dia mitady hitady rohy tsotra haingana).
Ny olana dia ity rafitra Bluetooth ity ao amin'ny solo-sainan'ny tapaky ny taona 2011 dia natsangana ary tsy te-hanova azy ireo any amin'ny fivarotana ofisialy izy ireo, na izany aza, misy safidy roa hanatsarana ny BT ary hiezaka ny hanana ny fampiasa Handoff:
1 Amin'ny alàlan'ny adaptatera BT 4.0 ivelany amin'ny alàlan'ny USB.
2 Ovao ny tabilao BT
3 Torohevitra manam-pahaizana
Amin'ny alàlan'ny adaptatera BT 4.0 ivelany amin'ny alàlan'ny USB.
Ao amin'ny System Prefers, mila manamarina ianao fa ny BT dia ekena ary miasa.
Safidio amin'ny toerana misy anao.
Tsy maintsy milaza amin'ny rafitra mampiasa ny Terminal miaraka amin'ny filaharana «sudo nvram bluetoothHostControllerSwitchBehaviour = »foana»«
Ity rafitra ity dia niasa tamin'ny rafitra sasany ary amin'ny hafa dia navelany tsy misy intsony ireo peripheraly fifandraisana.
Ovao ny tabilao BT
Ho an'ny iMac 21,5-inch manomboka amin'ny tapaky ny taona 2011 dia misy a torolàlana momba ny iFixit de ny fomba fanovana ny solaitrabe misy ny Bluetooth amin'ny lafiny iray misy ny kinova 4.0 an'ny protokolotika.
La torolàlana ho an'ny kinova 27 inch, fa ny iMac hatramin'ny tapaky ny taona 2010, manana izany amin'ny sehatra mitovy ihany koa ianao. (Misaotra anao MBerry ho an'ny fandraisana anjara)
Rehefa avy niresaka tamin'ny Genius maromaro avy amin'ny Apple Store izy ireo dia nanoro hevitra izy ireo fa, raha tsy manana fahalalana avo lenta ianao, dia aza miditra amin'ny fanovana takelaka. Toy izany koa, ny rafitra hafa dia mety handany anao 10 euro fa manala ny bibikely na hiasa amin'ny iMac anao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Continuity na Handoff ho an'ny Mac alohan'ny 2012
MBerry dia hoy izy:
Torolàlana ho an'ny 27-inch iMac Mid 2010
Valio amin'i MBerrios
Misaotra an'i MBerrios, tsy hitako io, ampidiriko ao anaty lahatsoratra io.
Mirary ny soa indrindra !!
Ary isika izay manana Macbook Pro 2010 dia tsy afaka manova ny puce Bluetooth? Mendrika ny usb bluetooth ve izany?
Eny, azonao atao koa, raha ny marina, amin'ny tranonkala dia misy fampahalalana bebe kokoa momba ny solosaina finday noho ny solosaina finday… manana torolàlana amin'ity rohy ity ianao:
Fampahalalana lehibe Carmen.
Tandremo sao ny rohy dia ho an'ny MacPRO 2010 ary ny fanontanian'i Josefa dia ny an'ny Macbook PRO 😉 Izay mahaliana ahy ihany koa hehe.
Ary isika manana iMac manomboka amin'ny 2009 ve azo atao ny manova azy?
Andao hojerentsika hoe mandra-pahoviana ny lantom-peo no mitsikera ity lahatsoratra ity ... fandraisana anjara tena tsara, Carmen, misaotra.
Misaotra an'i Toño!
Ary aiza no ahafahanao mahazo ny tabilao BT 4.0 ?, Izany hoe, inona ny fanondroana ilay singa ...
Ny torolàlana dia ao anaty torolàlana iray ihany, miankina amin'ny solosainao izy ireo, ary azo vidiana amin'ny iFixit iray ihany izy ireo na mety hitera-doza amin'ny eBay.
Raha tsy azonao antoka dia anontanio iFixit dia hamaly anao vetivety izy ireo.
Zahao ny pejy iFixit ary tsy hitako hoe aiza ny tabilao 4.0 ho an'ny maodely 2011 raha afaka mametraka ny rohy ianao dia ho tsara kokoa
Manuel Gallego dia hoy izy:
Ho an'ny Mac med 2011 dia tsy ilaina ny manova ny tabilao satria LE ny Bluetooth anao ary mifanentana dia azonao jerena ao: momba io Mac> fampahalalana momba ny rafitra> fitaovana> Bluetooth io.
Ny zava-mitranga dia tsy nampandeha azy tao amin'ny Mac tamin'ny 2011 i Apple.
Manazava izany aminao izy ireo amin'ity lesona ity:
Valiny tamin'i Manuel Gallego
Misaotra !! Tsy nametraka an'ity loharanom-baovao ity aho satria tsy mandeha ny iMac ahy tamin'ny tapaky ny taona 2011 ary satria tsy nisy ny fanehoan-kevitra dia tsy fantatro raha izaho irery na ny olon-drehetra.
Voalaza araka izany, misy fomba fahatelo ho an'ny Handoff, misaotra tamin'ny fandraisana anjara !!
(mariho; nesoriko ny iray amin'ireo hevitra, fa naverinao io, antenaiko fa tsy mampaninona anao ...)
Nanandrana tamin'ny iMac tapaky ny taona 2011 aho ary tsy mandeha ihany koa, ankehitriny ny lesona dia milaza fotsiny fa natao ho an'ny macboockair sy Mac mini
Salama! Ataovy ao an-tsaina fa ny dingana 12.13,14, 15, XNUMX ary XNUMX dia tokony hatao amin'ny Mac-XXX voalohany ... Ary tamin'ny fisehoana farany dia tsy nahomby aho teo ary zavatra iray hafa tsy nahombiazako dia ny fandikana ny pejy ary avy eo ny terminal baiko sahady fa samy hafa izy ireo ary tsy mandeha.
Raha ny tokony ho izy, ao amin'ny programa 0xED dia tsy ilaina ny mikaroka sy manolo, azo atao amin'ny tanana izany. Ilaina amin'ny dingana manaraka amin'ny fanovana ny isa an'ny MacBookAir1,1 sns ...
Manantena aho fa mety amiko izany, tonga lafatra ho ahy.
Raha te hahalala raha mifanaraka ny Mac dia tsindrio ny (paoma ankavia etsy ambony) > momba an'ity Mac ity> fampahalalana momba ny rafitra> fitaovana> Bluetooth
Ary eo no tsy maintsy apetrakao
LMP dika: 0x6
Bluetooth LE: eny (tohanana)
Raha miseho izany dia mety hahasoa.
Mirary anao ho tsara vintana. Mirary ny soa indrindra !!!
Tsisy fisaorana!! Tsy niasa ho ahy io raha vao nanova ny angon-drakitra mimari-droa miaraka amin'ny 0xED fa mila mitandrina tsara ianao mba hametahana ny zava-drehetra hitovy tanteraka fa tamin'ny fanindroany nataoko raha nahomby!
Carmen sy Manuel: kintana mahafinaritra ianao! 🙂
Mbola tsy manana Mac aho fa lohahevitra tsara.
Fa momba izay ihany.
Azo atao miaraka indray ve miaraka amin'ny ipad 3?
Valiny amin'i Elmike11
Tsy hitako ny maodelin'ny tabilao BT 4.0 ho an'ny 27-inch iMac tamin'ny taona 2010, raha misy olona manana data dia tiako io.
Lahatsoratra tsara! tsy misy na inona na inona momba ny Macbooks tamin'ny faran'ny taona 2008, sa tsy izany? Efa nijery «macrumors» aho fa tsy mametraka na inona na inona izy ireo. Heveriko fa ny masiniko dia mihoatra ny efa lany andro na dia miasa tsara amin'ny Yosemite aza. salama!
vehivavy ratsy fanahy dia hoy izy:
Misy fanamafisana ve amin'ny maodely manokana amin'ny adaptatera USB izay mandeha?
toy ny angon-drakitra, ity no maodely karatra hividianana Macbook pro faran'ny taona 2011 (mine xD).
Avy any Silia aho fa hanafatra izany any Etazonia na Eropa (na dia maharitra 1 volana aza)
Miala tsiny fa maodely BCM94331PCIEBT4CAX ity
Tsy fantatrao ny maodely ho an'ny 27-inch iMac tapaky ny taona 2010
Salama, ity koa dia mety amin'ny mac book pro 2011, inona no tsy maintsy ataoko hanovana ny tabilao na hanovana ny kaody?
Azo alaina izao ny iOS 8.1